I-SEO: Xhumanisa Izilingo Zokugwema | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 5, 2009 NgoMsombuluko, Septemba 21, 2015 U-Adam Encane
5 ″ /> Izinga legolide le-Google lokuthi ngabe iwebhusayithi kufanele ikalwe kahle iyaqhubeka nokushintsha ngokuhamba kwesikhathi, kepha isikhathi eside indlela ehamba phambili ayishintshile… efanele ama-backlink avela kumasayithi asemthethweni, anegunya. Ekhasini le-Search Engine Optimization nokuqukethwe okuningi okuhle kungenza isiza sakho sikhonjwe ngamagama asemqoka athile, kepha ama-backlink asezingeni eliphezulu azokhuphula izinga lawo.
Njengoba ama-backlink abe yinto eyaziwayo, imikhonyovu eminingi yokuxhumanisa nezinsizakalo ziyaqhubeka nokuqhamuka kuyo yonke iwebhu. Ungancengwa ekusebenziseni imali yalezi zinsizakalo. Ngeke nje uthuthukise izinga lakho, kungenzeka ukuthi ubeka amawebhusayithi akho engcupheni enkulu yokwehliswa ezinkombeni zenjini yokusesha.
Yebo, kunezinto ezinjengezixhumanisi ezimbi ezingenayo.
Nalu uhlu olusheshayo lwezinhlobo ezithile zezixhumanisi ongafuni ukukhomba kuwebhusayithi yakho. Lolu hlu akufanele ludidaniswe nezixhumanisi ezivele zingadluli inani elifana nezixhumanisi ne rel = "akukho okulandelayo" imfanelo.
Ungatholi izixhumanisi ezivela kumasayithi abonakala ngokusobala thengisa izixhumanisi zombhalo.
Ungathengi xhuma amapulazi. Kungenzeka ukuthi wahlangabezana nesivumelwano esifana nokuthi, thola izixhumanisi eziyi-1000 ze- $ 29.95 ngenyanga. Hlala kude nalezi zinhlelo.
Hlala kude nabantu abadumile link brokers njenge-thext-link-ads.com noma i-textlinkbrokers.com. Laba badayisi bazokuthengisela izixhumanisi zombhalo ngenhloso eqondile yokuthonya imiphumela yosesho lweGoogle. Lokhu ukwephula i- Imigomo Yesevisi ye-Google.
Uzothola abasebenzisi kumaforamu e-webmaster adumile anikezela ukuthengisa izixhumanisi eziphakeme ze-pagerank. Iningi lalawa masayithi lidalwe ngokuthenga izizinda eziphelelwe yisikhathi ngamazinga aphezulu Amanani we-Google PageRank futhi ngokushesha uphonsa amawebhusayithi wesifanekiso ngokungenanzuzo / okuqukethwe okuyingqayizivele. Lawa masayithi ngeke agcine lawa ma-PageRank ngokushesha lapho i-Google ibona ukuthi bashintshe ubunikazi nokuqukethwe. Kukhona nezindlela eziningi iGoogle engabona ngazo ukuthi lawa masayithi alula athengisa izixhumanisi.
Qiniseka ukuthi izixhumanisi zakho zivela Amawebhusayithi asuselwe e-US futhi aqondisiwe uma yonke imakethe yakho eqondiwe ise-US.
Awufuni ngempela izixhumanisi ezenziwe ngu- isofthiwe yogaxekile. Iningi lale software lishiya isondo futhi kulula kakhulu ukuthi i-Google ikubone.
Awufuni ngempela izixhumanisi ezivela ku- amawebhusayithi angenamsoco. Lawa amasayithi afana namasayithi ahambisanayo anokuqukethwe okuncane okuncane noma okungenakho.
Ungathumeli izixhumanisi kumasayithi ogaxekile ahlobene nama-P amathathu (i-porn, amaphilisi kanye ne-poker). Isikhathi.
Gwema isilingo sokuthumela izixhumanisi esithangamini umnikazi angasakwazi ukusilawula ngempumelelo futhi lokho igcwele ogaxekile.
Gwema isilingo sokungeza nokushicilela i-URL yakho ku- isixhumanisi memes. I-meme uhlu olukhulayo lwezixhumanisi ezidlula zisuka kwesinye isayithi ziye kwesinye ngenhloso eyodwa yokwabelana ngezixhumanisi kanye ne-pagerank kulo lonke uhlu lwabahlanganyeli.
Lezi yizinhlobo eziyishumi nje kuphela zezixhumanisi ongazifuni, kepha lolu hlu lukhona hhayi konke kuhlanganisiwe.
Tags: ama-backlinksugaxekile wamazwanaizixhumanisi zesizinda eziphelelwe yisikhathilink brokersxhuma amapulaziisixhumanisi memesXhuma ugaxekilelinksukuthengisa izixhumanisiugaxekile
Nov 6, 2009 ngo-5: 37 AM
@diiannaa ubuze nge # 3: Ngabe iGoogle izokwazi kanjani ukusho uma uthenga izixhumanisi?
Nov 6, 2009 ngo-7: 46 AM
Ngqo, iseluleko esiqinile.
Nov 7, 2009 ngo-5: 42 AM
Amanye ama-blogger akhombisile futhi ukuthi ngaphambi kokuthi uqinisekise ukuthenga kwakho unikezwa amawebhusayithi / amakhasi lapho isixhumanisi sakho sizohamba khona kulula kakhulu ukuthi omunye eqenjini logaxekile lakwaGoogle naye athole lolu lwazi. Kunezindlela ezisemthethweni zokwakha izixhumanisi ezingadingi izinkokhelo eziqhubekayo zokuxhumanisa abadayisi…
May 7, 2010 ku-1: 47 AM
kuthiwani ngokusebenzisa enye yalezi zinsizakalo ukuthenga izixhumanisi zogaxekile ngempela kumasayithi encintisana abekwe ngaphezu kwakho, ngethemba lokuthi i-google ibala amazinga azo?
May 9, 2010 ku-12: 15 PM
I-Google ayijezisi isizinda sama-backlinks e-spammy. Uma lokho bekusebenza, amabhizinisi azobe ecekela phansi isikhundla senjini yosesho ngalunye. Kungakho nje umane ungabanaki ngokuphelele.
Feb 2, 2011 ngo-11: 58 PM
Ngicabanga ukuthi umsebenzi wenziwe.
Aug 29, 2011 ngo-7: 28 PM
Kuyalinga kakhulu ukufaka "ohlangothini olumnyama" lwe-SEO bese uqala ukwakha lawo masondo wokuxhuma we-spammy, noma ukuhambisa i-PLR ephothiwe kabi ezinkulungwaneni zezikhombo zama-athikili, njll., Njll. Kubukeka sengathi wonke umuntu uyakwenza, futhi uyaphumelela ngakho . Kepha amava ami ukuthi iBig G ibamba ekugcineni futhi yehlise lezi zixhumanisi - hhayi ukuthi inenani elikhulu ukuqala ngalo. Okuthunyelwe okuhle BTW.
UJun 3, 2012 ngo-8: 39 AM
Ngiyawuthanda kakhulu umqondo.